Tuuta mallattooletti mallattoo dabaluuf qaaqa kana fayyadami, tuuta mallatoo gulaaluf, ykn sirnasxaa mallattoo fooyyessuf. Tuuta mallattoo haaras ibsuus ni dandeessa, mallattootti maqaa ramadi, ykn tuuta mallattoo amma jiraan fooyyessuuf.
Maqaa mallattoo ammaa filadhu. Mallattoo, maqaa mallattoo, fi tuutni mallattoon itti hammatamu bitaa hirdaatii duraargii jalaa saanduqa qaaqatti agarsiifamu.
Tuuta Mallattoo Moofaa
Saanduqi tarree kuni maqaa tuuta mallattoo ammee of keessatti qabateera. Yoo barbaadde, tuuta mallattoo adda addaas filachuu ni dandeessa.
Maqoota mallattoo tuuta mallatto amma keessa tarreessi. Tarree keessa maqaa filadhu ykn maqaa mallatto haara dabalame barreessi.
Mallattoo haara dabalaa jira
Tuuta mallattootti mallattoo dabaluuf, saanduqa Bocquu keessa Font bocquu fili, achumaan mallattoo hirdaatii mallattoo keesssa cuqaasi. Saanduqa Mallattoo keessatti, maqaa mallattoodhaaf barreessi. Saanduqa tarree Tuuta Mallattoo keessa, tuuta mallattoo fili, ykn maqaa haara tuuta mallattoo uumuf barreessi. Hirdaatii duraargii mirgaa mallattoo ati filatte agarsiisa. Dabala cuqaasi ittaansun TOLE.
Maqaa mallattoo fooyyessaa jira
Maqaa mallattoo jijjiruuf, saanduqa tarree Mallattoo moofa keessa maqaa mallattoo moofa fili. Ittaansuun maqaa haara saanduqa Mallattoo keessa galcha. Arfiin yaadame foddaa duraargii keessa jiraatu dhiisu utuu qabduu Fooyyessi hin cuqaasin mirkaneefadhu. Click TOLE cuqaasi.
Sanduuqni tarree mallattoo man`ee maqoota tuuta mallattoo hunda jiran qabata. Tuuta mallattoo tokkoo fooyyessuu ykn haaraa uumuu ni dandeessa.
Tuuta Mallattoo Haara uuma jira
Tuuta mallattoo haara uumuf, Saanduqa tarree tuuta Mallattoo keessatti maqaa isaa barreessi akkasumaas yoo xinnaate mallattoo tokkoo dabali. Qaaqa kana cufuuf TOLE cuqaasi. Tuutni mallattoo haaran maqaa haara jalatti ni argama.
Maqaa bocquu ammaa agarsiisa akkasumaas akka atii bocquu garagara filattu sii dandeessisa.
Too bocquu mallattoo alaa saanduqa Bocquu keessa filattee, cita tuuta yuniikoodii bakka mallattoo haara ykn gulaalame keewwatu filachu dandeessa. Yemmuu citi tuuta filamuu, mallattoolen hundi kan cita tuutaa tuuta mallattoo amma ta'an tarreele mallattoo armaan olii keessatti ni agarsiifamu.
Barfuula ammaatu agarsiifama. Saanduqa tarree keessa tokko filuun barfuula jijjiiru ni dandeessa.
Mallattoo foddaa durargii mirgatti mul'atan gara tuuta mallattoo ammaatti dabaluuf qaaqa kana cuqaasa. Maqaa saanduqa tarree Mallattoo keessatti agarsiifame jalatti olka'ama. Maqaa qabduu kana itti fayyadamuuf Mallattoo ykn Tuuta Mallattoo jalatti ifteessu qabda. Maqootni si'a tokko caala itti fayyadamuun hin danda'amu.
Maqaa mallattoo foddaa durargii bitaa keessatti mula'ate (maqaan inni moofan saanduqa tarree mallattoo moofa keessatti agarsiifama) maqaa haara saanduqa Mallattoo keessatti galchiteen bakka buusuuf qabduu kana cuqaasi.
Mallattoo gara tuuta mallattoo kabirootti siqsiisa jira
Akka fakkeenyatti, ALPHA guddaa "Giriiki" irra dabarsuuf tuuta "Addayaa" tti qindeessi, tuuta moofa (Giriiki ) fili ittaansun mallattoo ALPHA Saanduqoota tarree gubba lama fayyadami. Mallattoon foddaa durargii bitaa keessatti mula'atu. Saanduqa tarree tuuta Mallattoo keessatti, tuuta "Addayaa" fili. Fooyyessi cuqaasi achumaan TOLE. Mallattoon ALPHA amma tuuta mallattoo "Addayaa" keessa qofatti jira.
Mallattoo foddaa durargii bitaa keessatti mila'ate tuuta mallattoo ammaa keessa haquuf cuqaasi. Gaafatni ittisa hin jiru. Mallattoo dumaa qobaa hafee tuuta mallattoo keessa haquunis tuuta mallatto haqa.
Yeroo kamittu Dhiisi cuqaasuun jijjirra kee utuu ol hin ka'iin qaaqa cufu ni dandeessa.
Title is: Mallattoota Gulaali